Amabhlogo aphezulu e-alumina ceramic China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Advanced Ceramic Plate > I-Industrial Ceramic Plate > Amabhlogo aphezulu e-alumina ceramic
I-Model No.: Suitable
I-Alumina blocks ceramic
I-Alumina blocks ceramic yenziwe ngamaphesenti angu-95, 99% noma angu-99.5% aluminium oxide nge-ceramics, ingakhiwa ngokucindezela okumile ngomzimba obukhulu we-ceramic.
Siyakwazi ukwakha ubukhulu bebhokisi le-ceramic njengomdwebo wamakhasimende ngamunye kanye nokucaciswa, ngezinye izikhathi, sizosebenzisa ezinye izinqubo zokukhiqiza okucacile ukubhekana nale plateti ye-ceramic, njengokugaya okuhle, ukusika ngokucacile nokusika. Kungakhathaliseki ukuthi yiyiphi iphrojekthi ye-prototyping noma ilahlekelwa phansi. Yonke ibhokisi le-ceramic esenziwe yilezi zinhlobo ezifanayo.
Ngaphandle kwalokho, siye sahambisa i-alumina ceramic lining tile, ipulatifomu ye-alumina ceramic, ishidi le-alumina ceramic, i-alumina ceramic substrate njalo njalo.
● Ukwehla okuphezulu kwe-dielectric ● Amandla angokwenyama engavamile
● Ukushisa okuphezulu okushisa ● ukumelana nokubola
Uma ubheka ibhokisi le-ceramic elihle. Sicela ukhululeke ukuxhumana nathi. Sizozama konke esingakwenza ukuze sikunikeze ikhwalithi yekhwalithi kanye nensizakalo njengoba kulindelwe.
Thina, ku-Jinghui Industry Ltd iyinhlangano ehamba phambili yezakhi ze-ceramic e-China eminyakeni engaphezu kwengu-13, kufaka phakathi i-ceramics ensimbi, i-ceramic burrs ye-pepper / i-spice / usawoti usawoti, i-ceramic blade for coffee grinder, i-ceramic substrate yemishini ye-mircoelectronic, amashubhu e-ceramic, izingxenye ze-ceramic seal kanye nama-textile ceramic guides guide and so on.
I-Aluminium Oxide Ceramic Block
I-Ceramic Valve Disc